Khilaafka Jose Mourinho & Jamaahiirta Man United Ee Taageerista Romelu Lukaku Oo Sii Socota Iyo Mourinho Oo Markii Saddexaad Usbuuc Gudihii Dhaliilay Jamaahiirta Red Devils. – WWW.Gool24.net
Khilaafka Jose Mourinho & Jamaahiirta Man United Ee Taageerista Romelu Lukaku Oo Sii Socota Iyo Mourinho Oo Markii Saddexaad Usbuuc Gudihii Dhaliilay Jamaahiirta Red Devils.
Tababaraha kooxda Manchester United ee Jose Mourinho ayaa markii saddexaad usbuuc gudihii waxa uu dhaliil u soo jeediyay jamaahiirta kooxdiisa Red Devils iyaga oo isku khilaafsan taageerista Romelu Lukaku. Mourinho ayaan ku qanacsanayn taageerada uu Lukaku ka helayo Old Traffrod isaga oo waliba ka cadhaysan in jamaahiirta Red Devils ay xidiga ree Belgium taageerayeen kaliya markii uu goolasha dhalinayay.
Mourinho ayaa ku dooday in shaqadiisu ay tahay in uu ilaaliyo ciyaartoyda kooxdiisa Man United marka ay u qalmaan in la ilaaliyo wuxuuna ku dooday in Romelu Lukaku uu yahay lama taabtaan. Mourinho ayaa xusay in Lukaku uu si aad u fiican kooxdiisa ugu ciyaarayo.
Mourinho oo jamaahiirta kooxdiisa ka hadlaya ayaa yidhi: “Taageerayaashu waa taageerayaal isla markaana waxaan sheegay in jamaahiirtu ay tikidhka iibsadaan waxayna xor u yihiin in ay dareenkooda soo bandhigaan isla markaana ay sheegaan waxa ay doonayaan”.
Mourinho oo waxa ay shaqadiisu tahay u sheegaya jamaahiirta Red Devils ayaa yidhi: “Laakiin aniga shaqadaydu waa in aan ilaaliyo ciyaartoydayda marka aan dareensanahay in ay u qalmaan isla markaana Romelu waa mid ka mid ah ciyaartoyda ay waajibka tahay in uu lama taabtaan yahay ee ixtiraamka qofkasta uga qalmo”.
Mourinho ayaa si cad u difaacay bandhiga Lukaku wuxuuna yidhi: “Ma aha hal gool ama kubbada oo birta goolka ku dhacda ama badbaadin uu goolhayaha kooxda kale sameeyo taas oo Romelu ka hoos marin karta heerkiisa sare.Isagu si aad u fiican ayuu anaga noogu ciyaarayaa, haa waa waajib in aan ilaaiyo ciyaartoydayda marka ay u qalmaan in aan ilaaliyo”.
Mourinho oo si adag u sii hadlaya ayaa yidhi: “Romelu markasta wuu u qalmaa sababtoo ah waxa uu kooxda u qabtay waa fantastik. Ciyaarista kubbada cagta ee gool dhaliye kaliya ma aha in uu goolal dhaliyo, sidaa daraadeed, aniga ahaan waxa uu isagu kooxdayda ka yahay lama taabtaan waxaanan sidoo kale filayaa in uu dhinaca taageerayaashana ka noqdo lama taabtaan”.
Mourinho ayaa si cad markii saddexaad ee usbuucan u muujiyay in aanu ku faraxsanayn taageerada ay jamaahiirta kooxdiisu siinayaan Romelu Lukaku oo aan wax goolal ah dhalin saddexdii kulan ee ugu danbeeyay.